AASraw nmn & nr Mpanamboatra vovoka hplc≥98% | AASraw
AASraw dia manolotra fahaiza-manao famokarana bitika hamaly haingana ny fangatahana habetsahana kely kokoa sy ny filana fampandrosoana ilaina amin'ny ambaratonga (1 ka hatramin'ny 50 kg).
Ny fotodrafitrasa AASraw dia mifanaraka amin'ny famokarana mpanelanelana simika sy akora fanafody (API) miasa amin'ny fitsapana ara-pahasalamana.
ary koa ho an'ny API kely misy tsena. Ireo zavamaniry bitika dia miasa araka ny torolàlana GMP.
Ny fomba maodely AASraw hanamboarana ireo fitaovana amin'ny filàna manokana dia ahafahan'ireny fotodrafitrasa ireny hikarakara famokarana kely na salantsalany.
Ny famindrana sy ny fampitaovana teknolojia ary ny fampitomboana ny famolavolantsika ny zavamaniry maro samihafa.
Ao anatin'ny AASraw famokarana volavola feno sy serivisy fanamafisana, ny fahaiza-manao lehibe marobe dia atolotra ho an'ny famokarana hatramin'ny 100 maromaro taonina isaky ny vokatra sy taona, ohatra, 100 m3 fahafahana.
Zavamaniry natokana ho an'ny:
◆ Fihetseham-pitotoana sy fanehoan-kevitra mahery vaika hafa (hatramin'ny bar 80)
◆ Simia ambany mari-pana (midina hatrany amin'ny –80 ° C)
◆ Fanondrahana (1 taonina isaky ny batch)
◆ Fanomezana fanafody azo avy amin'ny fanafody (GMP)
◆ Famaranana (hatramin'ny dingana 70)
◆ Simia hafanana avo lenta (hatramin'ny 250 ° C)
◆ Mpiasa haingam-pandrefesana haingam-panentana maivana hatramin'ny 20 kilograma isam-bolana.
Fanokanana sy fanamainana
Fitaovana fanokanana ho an'ny ambaratonga kely, fanamboarana kilao ary fanamboarana lehibe.
◆ Fikirana fanenan-tsofina (finday sy famerana, efitra madio)
◆ Santrifuges (efitra madio)
◆ Efitra madio 3 (Class100'000)
◆ 2 efitrano fandraketana voatokana
◆ Fanamainana fanadiovana (GMP)
◆ Fanafody fanasan-damba
◆ Trondro maina roa (4.5m3, inôksa)